नागरिक एपबाटै अनलाइन भुक्तानी सुरु हुँदै, कसरि जोडिन सकिन्छ ? – ramechhapkhabar.com
नागरिक एपबाटै अनलाइन भुक्तानी सुरु हुँदै, कसरि जोडिन सकिन्छ ?
यसका लागि एपमा विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायक एवं भुक्तानी सेवा सञ्चालक संस्थाको प्रणाली जोड्ने तयारी भएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एक साताभित्र विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं भुक्तानी सेवा सञ्चालकलाई आवद्ध हुन आग्रह गरेको छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन थालिएको छ । तर सेवा लिने माध्यम फरक-फरक हुँदा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुने गरेको भन्दै सरकारले सबै सेवालाई समेट्ने गरी नागरिक एप ल्याएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्त्यसम्म ४२ वटा सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत नै लिन सकिने बनाउन लागेको छ ।